FJKM Ankadifotsy NY ZAVA-TSOA ENTIN’NY ZAVOKA ( AVOCAT ) / Hainao ve / Autres / Accueil - FJKM Ankadifotsy
NY ZAVA-TSOA ENTIN’NY ZAVOKA ( AVOCAT )14/07/2015 06:57
Otrik'aina maro isankarazany no hita ao amin' ity voankazo ity.
üVoankazo tokony hohanina mialoha ny hidiranan’ny ririnina ny zavoka. Hita betsaka eny an-tsena izy ity amin’izaofotoana izao. Ara-boajanahary dia mitondra hafanàna izy satria rehefa mandeha ny fandevonan-kanina, ny menaka avy amin’ny zavoka dia mitondra hery.
üMisy Vitamine C ihany koa ny zavoka. Rehefa ririninany andro, matetika voan’nygripa ny olona. Ny hery fiarovan’ny olona no mahasitrana azy izany hoe ny vitamina C ao anatiny no mampiakatra ny hery fiarovana. Ankoatra izany dia ny menaka azo avy aminy dia ilay cholesterol tsara ilay atao hoe“ HDL” (High DensityLipid).
üAzoampiasaina atao amin’ny tarehy hanaovana (masque) ho an’ny vehivavy ihany koa ny zavoka. Ny tarehy amin’ny ankapobeny dia tokony ho mandimandina. Ny hoditra dia tokony hisy ilay atao hoe« Sébum ». Rehefa maina ny hoditra dia mangidihidy na vakivaky. Koa mba hisorohana izany indrindra no hampiasana ny zavoka. Amin’ny hodi-tavan’nyzazakely tresatresaka rehefa ririnina dia azo atao tsara ny manosotra zavoka ny tarehy.